Guddoomiyihii hore ee degmada Wanlaweyn oo ku dhintay weerar ka dhacay Sh/hoose.
Al-Shabaab Oo Soo Bandhigaya Aragtidooda Ku Aadan Mashruuca Lagu Mideynayo Bariga Africa Ee Abey, Farmaajo iyo Afawerki (DAAWO Filim Cusub).
Sunday July 12, 2020 - 11:02:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in weerar hubaysan oo gaadiid looga gubay ciidamada Mareykanka uu ka dhacay koonfurta wadankaasi.
ilo wareedyo laga helay gobolka Aldiiwaaniyah ee dhaca koonfura Ciraaq ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo shiico ah ay weerar ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo sahay usiday ciidamada Mareykanka.
Weerarka oo dhacay gelinkii dambe ee shalay ayaa sababay gubashada Afar gaari oo nuuca shixnadaha qaada ah.
Weerarka oo ka dhacay wadada isku xirta gobollada Almuthanaa iyo Aldiiwaaniyah ayaa loo badinayaa in ay fuliyeen maleeshiyaadka shiicada garabyada daacadda u ah dowladda iiraan.
Wararka ayaa intaas ku daraya in gaadiidka lagubay ay ka tageen magaalada baqdaad waxayna kusii jeedeen dhanka dalka Kuweyt iyagoo sii mari lahaa magaalada albasrah ee ah caasimadda labaad ee wadanka Ciraaq.
Wakaaladda wararka Jarmalka oo soo xiganaysa ilo wareedyo dhanka ammaanka ah waxay sheegtay in gaadiidka xamuulka ah ee lagubay ay sideen qalab iyo sahay kale waxaana kaxaynayay darawallo ciraaqiyiin balse lamasoo sheegin wax dhimasho iyo dhaawac ah oo weerarkaas ka dhashay marka laga reebo in 4 kamid ah gaadiidkii urarnaa ciidanka Mareykanka lagubay.
Dagaal goos goos ah oo sababay khasaara dhimasho dhaawac leh ayaa lixdii bilood ee lasoo dhaafay dalka Ciraaq ku dhaxmarayay iiraan iyo Mareykanka tan iyo markii weerar xagga cirka ah lagu dilay Jeneraal qaasim suleymaani oo ahaa madaxii howlgalada dibadda ee ciidamka kacaanka shiicada iiraan